Kitra Analamanga : “Tohizan’ireo seksiona ny fanapotehana ireo klioba sy ny taranja”, hoy ny K2HB | NewsMada
Kitra Analamanga : “Tohizan’ireo seksiona ny fanapotehana ireo klioba sy ny taranja”, hoy ny K2HB
Mbola hitohy, mankany amin’ny firodanana indray ny baolina kitra eto Analamanga. Tomponandraikitra voalohany amin’izany, ireo mpitantana avy amin’ny seksiona. Mbola manome toerana, ireo mpitondra efa tsy nahomby mantsy, izy ireo.
Naneho hevitra avy hatrany ny komity te hamerina ny hasin’ny baolina kitra eto Madagasikara (K2HB), taorian’ny fanambaran’ireo filoha na seksiona fa mbola hanohana, ny filohan’ny ligin’Analamanga, teo aloha izy ireo, amin’ny fifidianana ho avy. “Voalohany aloha, tsy afa-miala fa tompon’antoka tanteraka, amin’ny mbola ho fahapotehan’ny kitra eto Analamanga, ireo filohan’ny seksiona ireo. Efa hita mantsy fa fitiavam-bola tafahoatra ny nitondrana ny kitra teto, hatramin’izay, dia mbola hitohy indray izany amin’ity.”, hoy Randrianindriana Jean Ignace (Ramasy).
Nomarihiny fa manao zavatra mifanohitra amin’ny fanatanjahantena, ny ligin’ny baolina kitra Analamanga. Notsiahiviny fa tamin’ny fifidianana farany, nohidiana tamin’ny toerana iray ireo filoha-na seksiona ka tsy navela hifandray, tamin’iza na iza. Tamin’ity indray, noterena hiteny am-pahibemaso, hanambara fa hanohana ny filoha am-perinasa, izy ireo. “Mety izay izany, ny tambiny nitondrana ireo filohan’ny seksiona ireo, tany amin’ny Cosafa cup, natao tatsy Maorisy, farany teo. Ankoatra izay, resin’ny ligin’Analamanga, hatramin’ny minisiteran’ny fanatanjahantena, izay afaka nanome “certificate de conformité, ireo ekipa matoatoa, tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana, ka afaka nandatsa-bato, tany amin’ny seksiona avaradrano. Tratran’ny filohan’ny ligin’Analamanga, ny tanjona dia ny nanaovana kandidà tokana, nanomboka tany amin’ny seksiona ka hatraty amin’ny ligy”, hoy hatrany i Ramasy. Nanamarika moa ny tenany, fa tsy misy tokony hanaovana fifidianana intsony, satria efa fantatra mialoha, ny fotoana ny vokatra.